Gịnị Bụ The Best Chiiz Europe nwere na-enye | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Bụ The Best Chiiz Europe nwere na-enye
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/04/2020)
Ọ bụ nnọọ a maara nke ọma eziokwu na Europe bụ ihe kasị mma ebe maka àgwà cheese. Na dị ka a cheese n'anya, eleghị anya ị chọrọ ịmata nke bụ ihe kasị mma cheese Europe nwere na-enye na otú ahụ na ọ.
Jikọọ anyị ka anyị na-agba ọsọ site na ndepụta nke Europe kasị mma na ndị kasị eme ememe chiiz. Anyị na-ekpughe nke ebe ndị a ma ama n'ihi na ụfọdụ chiiz. Anyị na-atụle otú a iru ndị a ebe conveniently na style ụgbọ okporo ígwè mee ka gị na European cheese njem onye ị na-agaghị echefu.
Switzerland karịrị 450 iche cheese nke bụ n'etiti ndị kasị mma cheese Europe. ya ọgaranya akụkọ ihe mere na cheese na-abịa na ọ dịghị onye n'anya ebe ọ bụ na Switzerland nwere dokwara nnukwu ugwu mgbe ọ na-abịa ha mmiri ara ehi. Ekele Switzerland si ikpọ ugwu, ehi na-ata nri na ọhụrụ, ọcha grasses. Ezie-nri ehi na-emepụta ihe kasị mma mmiri ara ehi nke na-eme ọbụna karịa flavorful chiiz.
The deliciously nwayọọ Emmental bụ ikekwe otu n'ime ndị kasị ama Swiss chiiz. Ị ga-ahụ ndị mbụ Emmental eso na Emmentaler Chiiz Factory Schaukaeserei. Switzerland bụkwa ebe ị ga-ahụ na-atọ ụtọ cheese ụlọ mmepụta ihe na-eme ka Gruyere, konkiri, Green Chiiz, Mmiri ara ewu Ricotta, Bregaglia, na Buffalo mozzarella.
I nwere ike mara mma nke ukwuu na-kasị mma Swiss chiiz ọ bụla nke Switzerland obodo ukwu nile dị otú ahụ dị ka Geneva, Zurich, ma ọ bụ Basel. Ị nwere ike iru a mara mma n'obodo ụgbọ okporo ígwè site ndị ọzọ na isi European obodo ndị dị ka Paris, Berlin, ma ọ bụ Rome. Na-abịa ka nta na obodo ntà famously maara dị ka isi iyi nke ọma ndị a chiiz, i nwere ike iri abụọ na ụgbọ oloko, otu otu isi obodo ọzọ iru obodo.
Mgbe ị na-eche banyere kacha mma cheese Europe nwere na-enye gị na akpaghị aka na-eche nke French chiiz, Obi abụọ adịghị ya na creamy Brie na ịrụ ezi Camembert abịa na-uche. Otú ọ dị, France na-mara maka ya ọgaranya Roquefort, ikekwe otu n'ime ndị kasị ochie chiiz. Nke a cheese bụ maka ndị na-enwetara enweta uto.
France bụkwa n'ụlọ Boursin, a creamy cheese na-ama ama site na ọtụtụ chefs dị ka ọ na-agụnye ndị mara mma n'ime efere. Chèvre bụ ihe ọzọ a ma ama French cheese. Ọ bụ a mmiri ara ewu cheese na a udidi na-adabere afọ nke cheese; ndị okenye na ọ bụ, ndị ọzọ acrid ma ọgaranya ya anọgidesi. Tomme de Savoie bụ a ike ehi mmiri ara ehi cheese na a buttery acha-ime na aja aja ikwo ihe.
Chọpụta ndị a flavourful French chiiz site na ịga na ọkacha mmasị gị French obodo. Were okporo ígwè na Paris, Lyon, Marseille, na obodo ndị ọzọ na France si kasị nke isi European obodo. Dị ka a cheese n'anya, ị pụrụ ọbụna ịchọ ileta farmhouses ebe ndị obodo na-eme ka chiiz. Ndị a bụ ndị na-adị mfe a pụrụ ime eme site n'ịnọgide na njem gị mgbe ị na-na-na na-eru isi obodo ụgbọ okporo ígwè.
Amsterdam ka Lyon site na Ọzụzụ
Best Chiiz Europe – Italy
The kacha mma cheese na Europe na-achọta na Italy, otu n'ime ụwa nnukwu cheese emepụta n'ụwa. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ama chiiz n'ụwa bụ Italian. Ònye bụghị nụrụ nke mozzarella, Parmigiano-Reggiano, na Ricotta? Ndị ọzọ a ma ama n'ụwa chiiz na n'eto si Italy na-Gorgonzola, Mascarpone, Provolone, na Pecorino. Ndị a na mpaghara na-emepụta chiiz bụ ndị kasị mma na-eji ọdịnala Ezi ntụziaka.
The Ịtali ha n'anya chiiz nke ukwuu nke na ha nwere ihe kasị mma cheese Europe ememme bụ akụkụ nke ha na omenala. Otu n'ime ndị kasị ibu cheese ememme bụ efe ara Chiiz Ememme na Piedmont. Sicily agba "Festival Of Ricotta Chiiz” ma ọ bụ ndị Ricotta na cheese Festival kwa afọ. Head ka Tuscany ke akpa Sunday na September na usọrọ Pecorino Chiiz Festival na ndị obodo.
Were okporo ígwè na Rome, Florence, Milan, Naples, na ndị ọzọ isi obodo ịlele kasị mma cheese Europe site na-emepụta, Save A Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cheese-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#cheese #Cheeze Food Travel travelfrance travelitaly travelswitzerland